CHA SRH3201 Series Through Hole Straight Type Rotary Switch - ချစ်သူ
နေအိမ် » ထုတ်ကုန် » CHA SRH3201 Series Through Hole Straight Type Rotary Switch
Cha DS DA DP(L) စီးရီး
Cha CDM / CDH စီးရီး
Cha EPM / EPH စီးရီး
CHA SHP စီးရီး
CHA C303 စီးရီး
CHA C3103 စီးရီး
CHA C3026(က) စီးရီး
CHA C3601 / 02 စီးရီး
CHA C601B စီးရီး
CHA C604 / C605 စီးရီး
CHA C3011A စီးရီး
CHA C3012 စီးရီး
CHA C3102 စီးရီး
CHA C3001 / C3001L စီးရီး
Push-Button Switch ကိုနှိပ်ပါ
CHA C1202A စီးရီး
CHA C1209 စီးရီး
CHA C3002 စီးရီး
CHA C1205 စီးရီး
CHA CN12 စီးရီး
CHA CN16 စီးရီးသတ္တု switches များ
CHA CN19 စီးရီးသတ္တု switches များ
CHA CN10 စီးရီးသတ္တု
CHA ul အတည်ပြု Key ကိုပြောင်းပါ
Cha RS စီးရီး
Cha RS17 စီးရီး
cha SRH3201 စီးရီး
CHA C3007 စီးရီး
cha CTR-8 စီးရီး
cha CTR-85/12 စီးရီး
CHA CTS(M)(ဇ)W1 / 2/6/8 စီးရီး
Cha ZTM စီးရီး
CHA CFSK-14 စီးရီး
CHA CFSK-18 စီးရီး
Cha CGNY-51 စီးရီး
CHA CHK-04, G စီးရီး
CHA CHK-14 စီးရီး
CHA WK2 စီးရီး
CHA WK10 စီးရီး
The SRH3201 Series PCB Mount Rotary Code switches with 8pin. Size : 42*26မီလီမီတာ. For more information, pls feel free to contact with us~
လျှောက်လွှာ : Video Surveillance
က: Usually it is 3-25 days, it is according to quantity.
သင့်တွင်ပြproblemsနာအချို့ရှိပါက CHA SRH3201 Series Through Hole Straight Type Rotary Switch, သို့မဟုတ် DIP ခလုတ်အကြောင်းအသေးစိတ်သိလိုသည်,သတ္တုပြောင်း,ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ,Tact switch,စသည်တို့. ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ!
Cha RS စီးရီး 4,6,8,10,16 Position Straight Type Rotary DIP Switch
Cha RS စီးရီး 4,6,8,10,16 Position SMT Type Rotary DIP Switch